Oduu Ammee! Filannoon garee PP fudhatama Dhabe! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee! Filannoon garee PP fudhatama Dhabe!
Oduu Ammee: Filannoon garee PP fudhatama Dhabe!
Filannoo fakkeessaa gareen mootummaa hoofaa jiru dhaabbileen addunyaa hin taajjabnu jechuun kuffisanii jiru. Gareen maqaa mootummaatiin waamicha kana dhiyeesse dhaabileen addunyaa 50 oliif xalayaa barreessee ture. Dhaabbileen kun garuu biyya nagaan hin jirre keessatti filannoo haasa’uun qoosadha jechuun harkatti didanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahimadin durfamu karaa hundumaa addunyaan itti dammaxee jirti.
Caffeen Oromiyaa guyyaa arraa irraa eegalee wal-gahii geggeessuu eegalee jira. Wal-gahiin kun maal murteessuuf akka deemuu hawwiin eegaamaa jira. Diramaa isaanii guyyaa Saftii/Sambata dabre irratti walii galan raggaasisuu qophii xumuranii jiran. Waa hundaafuu wal-gahiin guyyota 6 dura isin beeysifne eegalamee jira. Marii dhossaan taanii turan isin beeysifne turre. Arra ifatti baatee jirti. Maaltu murtaa’a. Waliin ilaalla. Nu hordofaa.
Oduu Simbirtuu Komaandoo Humna Addaa Oromiyaa
Miseensotni humna addaa Oromiyaa Komaandoo tahan lakkoofsaan 28 caalan hooggansi PP haqa qabeessa miti, garboomnee hin ergamnu jedhamuun diddaa kaasan. Loltootni kun yeroo ammaa humna guddaan marfamanii qabamanii hidhamanii jiru. Hidhaan humna addaa Oromiyaa keessatti jabaachuu cinaatti kanneen dirqamaaf bobbaafaman hedduunis dhumataa jiru. Oromoon ilmaankee harka PPdhaa baafadhu
This is one of the several appeal letters the OLF sent to the National Election Board of Ethiopia (NEBE) regarding the opening of its office and release of illegally detained leaders.
We hope the NEBE will address this request soon and excel its national obligations.